Qodobadii Ay Somaliland Iyo Soomaaliya Isku Maan Dhaafsanaayeen 8-dii Sano Ee Ugu Dambeeyey | Foore News
Home Aragtida Dadweynaha Qodobadii Ay Somaliland Iyo Soomaaliya Isku Maan Dhaafsanaayeen 8-dii Sano Ee Ugu...
Qodobadii Ay Somaliland Iyo Soomaaliya Isku Maan Dhaafsanaayeen 8-dii Sano Ee Ugu Dambeeyey
Jabuuti (Foore)- Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gaba-gabeeyay shir dhex maray madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Somaliland. Shirkan oo ay marti gelinaysay dowladda Jabuuti waxaa ergada labada dhinac kala hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Somaliland waxa ay madaxbannaani ku dhawaaqday markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, ku dhawaad 30 sano ka hor.
Tan iyo xilligaas wali Somaliland kuma ay guulaysan in ay beesha caalamka ka hesho wax aqoonsi ah balse waxa ay ku naaloonaysaa nabad galyo iyo maamullo si nabad ah isku baddala iyo doorashooyin dimuquraadu ah. Bayaanka ka soo baxay kulanka Jabuuti ayaa lagu qiray in shirarkii sannadihii hore aan horumar badan laga sameynin. Xitaa iyadoo aan wali la isla gaarin arrimaha masiiriga ah ee ku saabsan xiriirka mustaqbalka ayay labada dhinac isku mari waayeen qodobo aasaasi ah. Qaar ka mid ah shirarkii hore iyo qodobadii la isku mari waayay siddeedii sano ee la soo dhaafay ayaan qoraalkan ku soo koobeynaa:
Halkey ka soo billowdeen wadahadalladu?
Fikrika ah in ay wada hadlaan Dowladda Soomaaliya iyo Somaliland wuxuu markii ugu horeysey ka soo billowday shirkii caalamiga ah ee Soomaaliya loogu qabtay magaalada London, sannadkii 2012-kii. Mid ka mid ah qodobadii shirkaasi ka soo baxay waxa uu dhigayay in “beesha caalamka ay taageerto ahmiyadda ay leedahay in wadahadalo ay dhexmaraan” Somaliland iyo Dowladd Federaalka ee Soomaaliya. Dhawr bilood ka dib shirkaasi waxaa isla magaalada London ka qabsoomey shirkii ugu horeeyey ee fool ka fool ay isu soo horfadhiistaan labada dhinac, wuxuuna shirkaasi dhacay 20-kii bishii June, 2012-kii. Si loo dardargeliyo dadaallada wadahadallada. Somaliland waxay meelmarisay qaraar u oggolaanayay inay wadahadal toos ah la gasho dowladda Soomaaliya. Waxaana tan iyo xilligaas dhacay ilaa lix shir oo looga arrisanayay arrimahan.
Shirkii London ee 2012 ayaa lagu go’aamiyay in la billaabo wadahallada Dowladda Somaaliya iyo Somaliland
Dhowr bilood uun ka dib shirkii Soomaalida ee London, waxaa bilowday wadahadallo la xiriira – midnimo ama madaxbannaani. Waxaana ka mid ahaa midkii dhacay Bishii Juun, 2012-kii. Ujeedada shirkaas, oo ay martigelisay dowladda UK, wuxuu ahaa in waddada loogu xaaro waxa xaajoodka la xidhiidhay qodabadii ay labada dhinac ka wada hadli lahaayeen. Wakiiladii ka socday Somaliland ayaa markaasi ka carooday in shirka lagu soo daray masuuliyiin ka socday dowladda Puntland. Bayaan ka soo baxay kulankaasi ayaa lagu heshiiyay in la sii wado wahadallada, madaxda labada dhinacna ay yeeshaan kulan. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen ka wada shaqeynta la dagaalanka argagixisada iyo burcad-badeeda.
Waxaa isla sannadkii 2012-kii, magaalada Dubay ku kulmay madaxwenihii Dowladdii Kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynihii Somaliland ee xilligaasi Axmed Maxamed Siilaanyo. Waxaa kulankaasi martigleisay Dowladda Imaaraadka Carabta. Labada madaxweyne ayaa amray in guddiyada farsamo ee labada dhinac matalayay ay sii wadahaan wadahadallada.
Axmed Siilaanyo iyo Sheekh Shariif ayaa ku kulmay Imaaratka Carabta 2012-kii
Madaxweynihii Dowlladda Federaalka Soomalaiya ee xillaagaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynihii Somaliland ee wakhtigaa Axmed Siilaanyo ayaa ku kulmay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa Recep Tayyib Erdogan oo xilligaas Ra’iisal Wasaare ka ahaa Turkiga. Wasiirkii Arrimaha dibadda Turkiga Axmed Daud Oglu ayaa dhexhdexadinayay wadahadallada. Dhinacayda ayaa ku heshiiyay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin;
Wax yar ka dib kullankii Ankara, waxay labada dhinac mar kale ku kulmeen Istanbul bishii July 2013-kii. Kulankaas ayaa looga hadlay arrin muhiim ah sida maamulka hawada Soomaaliya. Waxay ku heshiiyeen in maamulka hawada laga soo wareejiyo Qaramada Midoobay oo maamulesay tan iyo 1991, markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Heshiiska wuxuu ahaa in magaalada Hargeysa looga dhigo saldhig. Lana qeybsada dakhliga ka soo xarooda maamulista hawada. Mar kale ayay dhinacyada ku kulmeen Istanbul bishii January 2014-kii iyagoo ku heshiiyay in la sameeyay guddi farsamo oo labada dhinac ah oo ka so shaqeeya qaabkii maamulka hawada loogu soo wareejin lahaa Hargeysa.
Kulankii Jabuuti – 2014-kii
Shir ay ka qeybgaleen madaxweynayaashii Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynihiin Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa ka dhacay magaalada Jabuuti, waxaana lagu kala saxiixdey heshiis dhigayay in wadahadaladii hakadka galay dib loo billaabo. Waxay sidoo kale isku afgarteen in aan la siyaasadeynin barnaamijyada gargaarka iyo horumarka. Waxay ku heshiiyeen in kulanka xiga ay ku qabsadaan dalka Turkiga January 2015.
Dhinacyada ayaa sidii ay ku heshiiyen isugu tagay magaalada Istanbul balse fool ka fool uma aysan kulmin. Labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay fashilka shirka. Somaliland ayaa ku eedeysay dowladda Federaalka ah inay si ula kac ah ugu soo dartay wakiiladeeda dad asal ahaan ka soo jeeda Somaliland. Dolwadda Soomaliya ayaa sheegtay in Somaliland aysan daw u lahayn inay u meeriso cidda ay tahay in ay wadahadallada ku matalaan.
Wixii intaa ka dambeeyay ma jirin wax wadahadal rasmi ah oo dhexmaray labada dhinac. Balse waxaa sii socday eedeynta ku saabsan cidda leh masuuliyada burburka wadahadallada. Afar sano ka dib markii la hakiyay wadahadallada, bishii February ee sanadkan, Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi waxay ku kulmeen magaalada Addis Ababa. Labada hoggaamiye waxaa xafiiskiisan isugu keenay Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Labada dhinac ayaa u muuqda inuu midba kan kale ku riixayo mas’uuliyadda caqabadaha hortaagan sidii miiska wadahalka loogu noqon lahaa, lamana saadaalin karo sida ay isugu tanaasuli karaan. Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa arrimo ka tabaneysa in Dowladda Farmaajo, waxayna ku eedeysay inay meesha ka saartay arrimihii horay looga heshiiyay. Guddiga Somaliland u qaabilsan wadahadallada Soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin wada xaajoodka laakiin ay marka hore dowladda federaalka ka doonayaan inay meelmariso heshiisyadii horay loogu gaaray kulamadii ay labada dhinac yeesheen.
Edna Adan Ismaaciil oo ka mid ah guddiga Somaliland u qaabilsan wadahadallada ayaa tidhi: “In la wadahadlo waan soo dhaweyneynaa. Wadahadalladu halkii ay marayeen laga soo billaabo kii koowaad ilaa kii lixaad, waxaa dhacayay isu soo dhawaansho.
“Umaddu way isu soo dhawaaneysay, waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalka aannu jaarka nahay ee Soomaaliya Farmaajo uu wada buriyo qodobbadii horay loogu heshiiyay oo dhan, oo intuu maalin soo toosay ayuu yidhi saxiixyadii madaxweyneyaashii hore waxba kama jiraan, oo uu yiri diyaaradaha hallaga maamulo xamar”.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay eedeymahaas waxa ayna sheegtay inay ka go’antahay sii wadidda wadahadallada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa raaligelin ka bixiyay “tacaddiyadii ay dowladdii Maxamed Siyaad barre ka geystay gobollada Waqooyi ee Soomaaliya”.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xaqiijiyay in ay soo wadayaan wadahadallada iyo isu soo dhaweynta labada dhinac. “Aniga iyo walaalkey Muuse Biixi waxaan halkan u joognaa in aan gaarno go’aanno adag si dadkayaga ay u helaan mustaqbal wanaagsan.” ayuu yidhi Farmaajo.
Previous article“Meles Zenawi Wuxuu Damacsanaa Inuu Midawga Afrika Horgeeyo Qaddiyadda Somaliland, Abiy Axmedna Dhulka Ayuu Dhigay Maqaamka Somaliland” Wasiir Hore Oo Itoobiya Ah
Next articleTurkiga Oo Saluug Weyn Ka Muujiyay Shirkii Somaliland Iyo Soomaaliya, Kana Hadlay Halka Ay Ku Dambeeyeen Heshiisyadii Ay Hore Labada Dhinac U Wada Gaadheen